युवाहरुमा क्रान्तिकारी चरीत्र कमजोर हुँदै गएको छ - Rastriya Samachar
सोमवार, २७ साउन २०७६ २१:२७
युवाहरूका अगाडी समस्याका चाङहरु छ्न। थुप्रै जटिलताहरु छन। युवा आन्दोलन लाई सहि दिशामा अगाडी बाढाउन प्रथमतः हामिले देशको राजनैतिक परिस्थितिको बारेमा जानकार हुनुपर्छ। समस्यको समाधानको लागि राजनैतिक निकास खोज्नु पर्छ। द्वितीयत क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडी बढाउन राजनीतिक संकटलाई दूर गर्न सम्पुर्ण युवाहरू एक हुनुपर्छ। त्यसको लागि युवाहरूको बिचमा बैचारिक र सैधान्तिक प्रशिक्षण सहित युवाहरूले बलियो संगठन निर्माण गर्नु पर्दछ।
अहिले युवा आन्दोलनलाई अगाडी बढाउने नाममा एनजीओ र आईएनजीओ जुन भुमिका खेलेका छन त्यसले युवाहरूलाई प्रलोभनमा परेको छ। अर्थात युवाहरू राजनीतिक घेरा भन्दा बाहिर पुगेका छन । समस्याको समाधान र आमूल परिवर्तन गर्ने नाममा युवाहरूलाई थुप्रै राजनैतिक पार्टीहरु ले अलमलाएको स्थित छ। त्यसप्रकारका राजनैतिक पार्टीलाई युवाहरूले चिन्न जरुरी छ। नेपाली जनता र युवाहरू को पक्षमा काम गरिरहेका पार्टी र संगठनलाई युवाहरूले चिन्न सकेनन् भने युवाको भबिस्य झन कष्टकर बन्दै जाने निश्चित छ । नेकपा बिप्लपले बलिदानको लागि युवाहरूलाई भावनामा बहकाएर उनिहरुको भबिस्यलाई झन अन्धकार तिर धकेल्दै छ। युवाहरू लाई हत्या, चंदा र लुटको निम्ति प्रयोग गरेको छ।
सत्तारूढ पार्टी नेकपाले समेत पन्चायतकाल मा जसरि पन्चहरुले युवालाई मण्डलेको रुपमा प्रयोग गरे त्यही प्रकारले, छाडा संस्कृति, गुण्दागर्दी, कालोबजारी र लागुपदार्थ ओसारपसारमा समेत सत्तारूढ पार्टी ले त्यस्ता अनैतिक गतिविधि गर्ने युवाहरूलाई चुनावी स्वार्थको लागि छुट दिएको स्थिति छ। नेपाली कांग्रेस लगाएतका विभिन्न शक्तिहरुले पनि त्यही प्रकारले युवाहरूलाई यथास्थितिमै “जे मन लाग्छ गर” भन्ने मन्नेतामा युवाहरूलाई छुट दिएको छ। यो प्रकारले युवाहरू बद्नाम हुँदै जादा देश र समाज कस्तो बन्छ भन्ने सजिलै अडकल गर्न सकिन्छ। के हामीले खोजेको समज यस्तै हो या युवाहरूको काम के हो ? यस बिषयमा व्यापक छलफलको जरुरी छ। देशमा राणा शासन ढल्यो, पन्चायत ढलेर बहुदल आयो, निरंकुश राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आयो ती सबै प्रकारका परिबर्तनका आन्दोलनमा युवाहरूको ठुलो बलिदान छ। त्याग छ। थुप्रै योद्धाहरु सहिद बनेका छन। तर पनि सत्तामा नपुग्ने बेला सम्म धेरै राजनैतिक दलले युवाहरूको विचमा क्रान्तिकारी कुरा गर्ने, युवाहरू लाई गुलिया र मिठा सपना देखाएर युवालाई प्रयोग गर्ने, जनताको अधिकारको निम्ति कुर्लने तर सत्तामा गए पछि नतमस्तक भैइ बस्ने सत्तासिन पार्टीहरुको सत्तालिप्त र अवसरबादी उदेश्यका कारण युवाहरु आफ्ना आन्दोलन र अधिकारलाई संस्थागत गर्न सकेका छैनन् । यो नेपाली युवाका लागि अत्यन्त दु:खद क्षण हो।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०१९ मनाउदै गर्दा थुप्रै युवाको समस्या झन जटिल बन्दै गैइरहेको छ। देशको बहुमत युवाहरु रोजगारीको लागि बिदेशीयको छ। युवाहरुको सीप र दक्षताको समस्या बढेर गएको छ। युवाहरू मा गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको अभाव छ। खेल क्षेत्रमा युवाहरू को व्यापक संभावना हुदा हुँदै पनि राज्यले युवाहरु लाई अवसर दिन चुकेको छ। जसका कारण युवाहरुको प्रतिभा र सिर्जनशीलता त्यतिकै गुमनाम भएको छ। युवाहरू उद्यमशीलता तिर आकर्षण हुन सकिरहेका छैनन्। देशमा यो समस्या युवाहरूको मात्र नभएर मजदुर, किसान, महिला र सम्पुर्ण मेहनतकस जनताको समस्या यस्तै प्रकारको छ। जनतालाई स्वास्थ उपचारको समस्या छ। आफ्ना जिविका चलाउन समस्या छ। गरीबीको मारमा जनताहरु छट्पटीएको स्थिति छ। महँगीले जनतालाई कुल्चेको छ तर जनताले आफ्ना आवस्यकता पूरा गर्ने आमदानी गर्ने श्रोतको अभाव छ। यस प्रकारको समस्या हुनुको सबैभन्दा ठुलो कारण बेरोजगारी हो। जनतालाई रोजगारी दिने दायित्व राज्यको हो तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। यस तर्फ पनि नेपाली युवा अत्यन्त सचेत भएर आफ्नो अधिकारको खोजी गर्नु पर्ने आवस्यकता छ।
भनिन्छ युवामा तातो र रातो रगत हुन्छ। तर देशको सिमा मिचिदा, महङ्गगि ले सिमा नाग्दा, देश अराजकता र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम डुब्न लाग्दा बोल्ने र आन्दोलित हुने युवा जनशक्ति खोइ ? कुनै पनि पार्टीलाई सहि मार्गमा हिडाउने र न्याय पुर्ण आन्दोलनको नेतृत्व कर्ता नै युवा भएको हुदा कमसेकम युवाहरू देशको अबस्था सम्झेर एक पटक गम्भीर त बनौं ? युवाहरू ले देशको यो अबस्था देख्दा अलिकति पनि छाती पोलेन भने हामी कसरी आफुलाई युवा भन्न सक्छौ। र युवाहरू जुझारु हुन्छ्न, क्रान्तिकारी हुन्छन्, न्यायप्रेमी हुन्छन् भनेर मात्र युवाको परिभाषालाई ब्याख्या गर्नु मा खासै अर्थ देखिदैन। माओसेतुङ ले भन्नू भएको छ ” युवाहरू नै समाजका सबभन्दा सक्रिय र जीउँदा शक्तिहरु हुन।” जसरी मओले भन्नू भएको छ त्यसरी नै युवाहरूले समाजमा सकारात्मक काम गर्न र देशको बिकासको निम्ति जुझारु प्रकारले अगाडी बढनु पर्छ।
संघीयताका कारणले राष्ट्रियता खतरामा छ। राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक का कारणले कुनै दिन खास नेपाली अल्पमतमा पर्ने स्थिति छ। बिस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिले नेपालको प्राकृति श्रोतहरु कब्जा गर्ने रणनीतिमा अगाडी बढेको छ। त्यति मात्र नभएर देशलाई सिक्किम जस्तै निल्ने योजनामा प्रतिक्रियावादी शक्तिको चलखेल बढाएको छ। खै ? काहाँ छ राष्ट्रघात विरुद्ध आन्दोलन गर्ने युवा शक्ति ? यदि बेलैमा युवाहरू एक भएर राष्ट्रियता स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति अगाडी बढ्न सकेनौ भने एक दिन देश नाईजेरिया, सुडान र सोमालिया बन्ने खतरा छ। तसर्थ युवक संगठनले जनतालाई ब्युझाउदै नेपालको अस्मिता जोगाउन जरुरी छ। सिमा सुरक्षा र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति सैद्धान्तिक जनमुखी र जुझारु चरीत्रको बिशाल संगठन निर्माण गर्न अवस्यक छ।
त्यसैले युवाहरू ले देशका तत्कालीन समस्यालाई चिर्न सक्ने, क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा लैजान सक्ने युवाहरूको संगठन निर्माण गर्नु पर्ने आवस्यकता हाम्रो अगाडी आएको छ। यो देशलाई आमूल परिबर्तन गर्न जनताको घर झुपडीमा गएर उत्पीडित, निमुखा बर्गको न्याय, स्वतन्त्रता र समानताको लागि जुझारु संगठन निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। जुन संगठन ले प्रतिक्रियावादी, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, दलाल र सबै प्रकारका अवसरवादी हरु संग लड्ने हेक्का राखोस। अन्तमा देश बिदेशमा रहेका सम्पुर्ण युवाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०१९ को भब्य शुभकामना !